A thief andapothea - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız::athief andapothead ! (İngilizce - Birmanca)
မြေခွေးတို့နှင့်ညီအစ်ကိုတော်၏။ ကုလားအုပ်ငှက် တို့နှင့် ပေါင်းဘော်ရ၏။
နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏။
ယနေ့ ကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့် ကျိန်ခြင်းတည်း ဟူသော ဤနှစ်ပါးကို သင်တို့ရှေ့မှာ ငါထား၏။
ဒုတိယအတန်းကား မြ၊ နီလာ၊ စိန်။
ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍၊ ယာကုပ် အမျိုး၏ ဘုရားသခင်သည် ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။
အဆွေခင်ပွန်းသည် အခါခပ်သိမ်းချစ်တတ်၏။ ညီအစ်ကိုသည် ဒုက္ခကာလအဘို့ မွေးဘွားလျက်ရှိ၏။
ရန်တွေ့တတ်သော မယားသည် မိုဃ်းသည်း စွာ ရွာသောနေ့၌ အစက်စက်ကျသော မိုဃ်းပေါက်နှင့် တူ၏။
အကယ်စင်စစ်၊ ညှဉ်းဆဲခြင်းသည် ပညာရှိ သောသူကို ရူးစေတတ်၏။ တံစိုးသည်လည်း စိတ်နှလုံးကို ယိုယွင်းစေတတ်၏။
သဘောကောက်သောသူသည် ရန်မျိုးစေ့ကို ကြဲတတ်၏။ ကုန်းတိုက်သော သူသည်လည်း၊ မိတ်ဆွေ တို့ကို ကွဲပြားစေတတ်၏။
ကြာမြင့်စွာသည်းခံလျှင် မင်းကိုဖျောင်းဖျနိုင်၏။ ချိုသောစကားသည်လည်း အရိုးကျိုးအောင်တတ်နိုင်၏။
ကိုက်ဖြတ်၍ ဟောက်တတ်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်ကို ပစပ်ဟကြပါ၏။
သင့်အိတ်၌ ကြီးသောအလေး၊ ငယ်သောအ လေးတည်းဟူသော ခြားနားသော အလေးကို မရှိစေရ။
ဒုတိယအတန်းကား၊ မြ၊ နီလာ၊ စိန်၊
မင်းပြုသောကျွန်တပါး၊ ဝစွာစားရသော လူမိုက် တပါး၊
This means that the military government will remain in power for more thanayear andahalf.
ဤသို့ဆိုလျှင် စစ်အစိုးရသည် နောက်ထပ် တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက် ဆက်လက်ပြီး အာဏာတည်ရှိနေဦးမည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။
study hard (İngilizce>Malayca)wonhae manhi (Korece>İngilizce)courant électrique (Fransızca>İspanyolca)droplets (İngilizce>Tagalogca)gee meaning (İngilizce>Telugu)nó làm như nó đẹp lắm (Vietnamca>İngilizce)utilizzo fondo svalutazione crediti (İtalyanca>İngilizce)medelhavsområdet (İsveççe>Yunanca)bicijangueo (İspanyolca>İngilizce)faglig leder (Norveççe>İngilizce)mater et puer (Latince>İngilizce)que voulez vous dire (Fransızca>İngilizce)tukar jawi ke rumi (Malayca>Arapça)mark white born july41949 (İngilizce>Fransızca)saya membuat keputusan yang sangat sukar (Malayca>İngilizce)thank you my all friends who wish me (İngilizce>Hintçe)facciando (İtalyanca>İngilizce)veemente (İtalyanca>İngilizce)le garcon court (Fransızca>İngilizce)naughty boy (İngilizce>Galce)mefibóset (Afrikanca>İngilizce)this song touch my soul (İngilizce>Hintçe)bakit mo ko minumura (Tagalogca>İngilizce)course outline in filipino (İngilizce>Tagalogca)hindi ko inaasahan na ganito ang mangyari (Tagalogca>İngilizce)